Mashandisiro ekushandisa iyo iPhone kamera kubva kuApple Watch | Ndinobva mac
Mashandisiro ekushandisa iyo iPhone kamera kubva kuApple Watch
Chokwadi vazhinji venyu munotoziva mashandiro atinawo muApple Watch uye izvo zvinotibvumidza kumisikidza iyo iPhone kamera kure. Iyi sarudzo ndeye tora mapikicha usina kubata iyo iPhone, ndiko kuti, kusiya foni yakaiswa chero kupi, katatu kana rutsigiro.
Chinhu chakanakisa nezve basa iri ndechekuti rinoshanda nemazvo uye hazvidi kuti mumwe munhu atitore pikicha kana tichida kubuda mune imwe nharaunda kana isu tasvika kure neiyo iPhone pachayo, ichi chi veteran watchOS chimiro Asi izvo zvinogona chaizvo kuuya zvinobatsira mune akawanda mamiriro uye zvakanyanya saka izvozvi muzhizha kuti isu tinowanzo tora mamwe mafoto neshamwari, mhuri uye vamwe vari muboka.
Uye zvakare, Apple yakaburitsa vhidhiyo mazuva mashoma apfuura ayo ayo anoratidza basa uye iro rinowanikwa pane Apple rutsigiro chiteshi. Heano mashandiro uye kushandiswa kweiyo iPhone kamera kubva pakurinda fomu iri kure:
Zvakare paunogona kuona muvhidhiyo mushandisi anogona kusarudza pakati akasiyana mabasa anowanikwa nekudzvanya pamatombo matatu. Idzi sarudzo dzinotibvumidza kuchinjika pakati pekamera yekumberi kuenda kumashure, kuwedzera otomatiki Flash, yakavhurwa kana kusabatika zvachose, chinja pakati pe otomatiki Live Mifananidzo fomati, yakamisikidzwa kana kuremedzwa, uye mhando yeiyo HDR yakaitwa kana kuremedzwa.
Zvakanakisa pane zvese ndezvekuti basa iri rinowedzera otomatiki-yechipiri-nguva uye zvakare inotora gumi zvinotorwa kuitira kuti ugone kusarudza yaunonyanya kufarira kana anga ari akanakisa. Ipapo iwe unogona zvakare kuona iyo mufananidzo zvakananga kubva kuApple Watch uye dzokorora kuitira kana ikasazobuda sezvaidiwa. Zvese pasina kubata iyo saiti iPhone mairi makaiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Mashandisiro ekushandisa iyo iPhone kamera kubva kuApple Watch
Iyo Fox Zvino app haichawanikwe pane yechitatu-chizvarwa Apple TV
Almost 240 euros dhisikaundi pane 16 "MacBook Pro